SLING FOR A BAKAYLE: SIDA LOO DOORTO, SIDA LOO XIRTO, SIDA LOO SAMEEYO DHOGORTA LEH GACMAHAAGA - XOOLAHA
Sidee loo xiraa duufaan on a bakayle
Hadda, sida xayawaan, qaar jecel qaarkood waxay keenaan bakaylaha. Xayawaannada dufanka leh iyo kuwa dareenka leh waxay noqdaan xubno ka yar qoyska. Waqtiga diiran, waxaa loo qaadi karaa socod ama la geeyaa waddanka. Si looga hortago xayawaanka ka baxsan ama kaa fogaanaya, waa inaad isticmaashaa dunta. Ka fiirso waxa ay yihiin jaangooyooyinka, sida ay tahay in loo xirxiray iyo haddii la samayn karo gacmahaaga.
Waa maxay xakamaynta
Khamriga isgoysyada wuxuu yeelan karaa xalal wax dhisid oo kala duwan oo laga sameeyo waxyaabo kala duwan.
Baro sida loo daryeeli karo bakayle ah xafaayadda.
Waxaa laga sameeyaa xadhkaha dhejiska. Dhismaha xadhkaha noocan oo kale ah waa in aysan aheyn mid adag ama ay adag tahay in lagu xiro xijaabka iyo walxaha. Qaabku waa inuu ahaado mid sahlan oo sahlan. Isla mar ahaantaana, xakamaynta noocan oo kale ah waa in aysan aheyn bilaash, waa in ay ku dhawdahay jirka si markaa xayawaanku uusan uga soo bixin.
Faa'iidada fursaddan ayaa ah in badeecadaha xirmooyinka ay aad u jaban yihiin.
Waa muhiim! Bakaygu wuxuu ka jawaabi doonaa isku daygiisa inuu ku socdo xakamaynta maaha sida eeyga. Xaaladdani waxay noqon kartaa mid aad u walwal badan, isaga oo aan wax faa'iido ah ka heli doonin socodka. Haddii uu caloosha ku dul seexdo oo uusan wax xiiso ah u haynin deegaanka, markaa waa in la joojiyaa oo aan soo noqnoqonin.
Kala duwanaanta nooca jilicsan ayaa ah mid sahlan oo lagu kalsoonaan karo - xayawaanku iskuma baxsan karo, dharkana sidaas uma yeeli doonto xayawaanka, iyada oo aan loo eegin sida uu u dhaqmayo. Sidoo kale way fududahay in qofku isticmaalo, maadaama uu yahay mid ku haboon inuu xayawaankan xayawaanka ah u qaado isaga oo leh dunta.
Waxa aad raadineysid marka aad iibsaneyso
Markaad doorato xayawaankaaga xayawaankaaga socodka, waa inaad u fiirsataa waxyaabaha soo socda:
cabbirada. Karkinku waa inuu si fiican u fariistaa bakayle, ma aha mid aad u adag ama dabacsan;
kalsoonida. Qalabka dhismaha, iyo walaxda lafteeda waa in aan lagu waxyeeleynin culeyska iyo joogitaanka dhaqdhaqaaqa firfircoon ee xayawaanka;
Baro sida loo abuuro bakaylaha quraaradaha, sida ay u xanuusadaan, haddii ay ku maydhaan, sida loo ciribtiro urta aan fiicneyn ee bakaylaha.
xejin. Waa in si haboon loo hubiyo oo si ammaan ah u xiraa oo aan u adkeyn;
alaabo. Waa inuu ahaado xayawaan sax ah oo joogto ah;
xiro. Waa in si ammaan ah loogu dhajiyo bartamaha dhabarka. Nidaamka noocan oo kale ah ayaa ah midka ugu habboon oo ammaan ah xayawaanka ciriiriga ah. Xulashada ugu habboon ee bakaylaha waa xayiraad-roulette.
Sida loo xirto xakamaynta
Kabmadu waxay ka kooban tahay labo xargo oo isku mid ah, mid ka mid ah oo ka weyn kan kalena waa yar yahay. Kabaha xadhiggu waxay bilaabaan inay xirtaan madaxa. Marka hore, giraanta yar ayaa lagu tuuraa qoorta. Suunka labaad ayaa la jiidayaa hoosta hoose ee caloosha oo giraanta labaadna waxaa lagu dhajiyaa. Si aad dib ugu dhejisid hogaanka.
Ma taqaanaa? Dadka qaarkiis waa qalad, iyadoo tixgelinaya bakaylaha sida jiirka - waxay ka tirsan yihiin amar diidmada ah. Inkasta oo ay isku midka yihiin, haddana iyagu iskuma dhexgalin, sababtoo ah bakaylaha waxay leeyihiin 22 lamaanood oo koromosoom ah, iyo hares - 24.
Noocyada kala duwan ee jirka ku jira qaabka jilibka ayaa ah midka ugu sahlan in la dhigo. Marka hore, joodariga noocaas ah wuxuu ku xiran yahay caloosha, ka dibna qoorta. Dareerka ayaa kuxiran dhabarka dambe.
Dhaqdhaqaaqa, oo lagu sameeyay gacmihiisa, ayaa si ka duwan u kala duwani. Ugu horreyntii, boorsooyinka hore ayaa lagu riixaa giraanta si ay u xirto suunka si ay suunka u kala soocaan giraangirta caloosha. Xaaladdan oo kale, siddooyinku waxay ku xiran yihiin carabiner ah oo ku xiran qiyaastii bartamaha dhabarka.
Waxaannu u habeynay bakayle suunka
Barista labbo duufaanta waa inay bilowdaa sida ugu dhaqsaha badan. Nidaamka daroogadu wuxuu qaadanayaa 5-7 maalmood. Ugu horreyntii, suunka dhagta ee lagu xardhay guriga. Marka la jiido markii ugu horeysay, wuxuu kaliya u baahan yahay inuu ku jiro dhowr daqiiqadood.
Kadibna wakhtiga lagu qaato suumanka ayaa si tartiib ah u kordhaya. Waa in aan waqti u ogolaano bakayleedka in la isticmaalo oo joojiyo isku dayidda in ay ka baxaan. Marka tani dhacdo, waxay xirtaan xakameynta iskuna dayaan inay xayawaanka ku dhex wareegaan qolka. Kadib markii uu isticmaalo qulqulka, waxaad aadi kartaa wadada isaga oo lugeynaya.
Ma taqaanaa? Kabaha ugu yar ee ku yaalla Dhulka waa bakaylaha pembey ee ku nool qaarada waqooyiga Ameerika. Waxay ku dhacaan xaalad qaan-gaar ah oo miisaankoodu aanu ka badnayn 400-450 garaam oo kora dhererkoodu ilaa 22-35 cm.
Marka hore, markaad guriga ka baxsan tahay xayawaanka, uma baahnid inaad ka guurto oo aad iska xoqdo. Xayawaanka ayaa laga cabsi qabaa mana rabo inay tagaan socod. Si sahlan, waxaa lagula talinayaa in aad soo iibsato roulette hog ah. Xayawaan sidan oo kale ah xayawaanku wuxuu joojin doonaa in uu ogaado in uu kuusku xiran yahay. Dhamaan walxaha waa la xirxiray iyada oo aan khasab ahayn sidaa daraadeed in bakaygu uusan sameynin aragti xun.
Sidee iyo meesha ugu fiican ee aad u socoto bakayle
Haddii aad go'aansato inaad ku socoto xayawaankaaga, marka hore waxa uu u baahan yahay in la tallaalo si looga hortago cudurada guud ee halista ah. Si aad u socotid waa inaad doorataa meel xasilan oo aan xayawaanku ku dhicin qaylada iyo baabuurta kale, eeyaha jilicsan iyo wixii la mid ah. Meel fiican oo aad ku socon karto waxay noqon doontaa dhulka villa, haddii aad mid leedahay. Xaaladdan, waxay xitaa u qalantaa iibsashada ama sameynta dabool furan.
Meesha loo socdo bakaylaha waa in lagu qaadaa siddeedda. Socodka waa inuu ku jiraa cimilada kulul - qabow, dabayshu iyo jilicsani waxay si xun u saamayn kartaa caafimaadkiisa. Xilliga kulaylaha, waa in la sameeyaa subaxnimada ama fiidkii, marka ruxradaha tooska ah ee qorraxda aan waxyeello u geysan karin xayawaankana ma aha mid aad u kulul.
Inta lagu jiro jimicsi, waa in xayawaanka la kormeero si uusan u dhicin xadhigga oo uusan waxyeello u geysan. Xaqiiji in aysan jirin geedo sun ah oo ku yaal xayawaanka sii kordhaya ee socodka. Xajmooyinka soo socda waxay keeni karaan sunta ah ee bakaylaha: caajis, xargo, celandin, foxglove, lakabada, xajmiga, xajmiga, daroogada iyo kuwa kale.
Sida loo socdo bakayle ah suunka: video
Waa muhiim! Xayawaannada xayawaanku waxay cabsiin karaan bakaylaha dhimashada - baqaradaasi waxay u nugul yihiin walaac. Sidaa darteed, haddii aad aragto eey weyn oo aad u qaylinaya meel socod ah, waa inaad raadsataa meel kale.
Sida loo sameeyo caarada loogu talagalay bakayle adiga ayaa sameeya
Mararka qaarkood way adag tahay in la helo dukaamada khaaska ah duufaanta lagama maarmaanka u ah xayawaankaaga ama alaabooyinka ku jira kaydka, kuma qanacsana midabka, qiimaha, wax soo saarka. Xaaladdan oo kale, xakamayntu waxay ka fiican tahay inaad sameyso gacmahaaga. Dhaqdhaqaaqa, taas oo lagu sameeyo sida aad u dhadhan tahay xayawaankaaga xayawaankaaga, waxay hubaal tahay in ay haboon tahay oo ay noqon doonto mid raaxo leh in la isticmaalo.
Wixii soo saarid waxay u baahan doontaa qalabka iyo qalabka soo socda:
cabbir ahaan cabbiraadda cabbiraadda;
dharka jilicsan ee jilicsan (tusaale ahaan, dhar jilicsan);
giraanta dhexroor yar;
Waad ku dhejin kartaa gacmahaaga adoo raacaya tilmaamaha soo socda:
qiyaastii seddax mitir. Si arrintan loo sameeyo, waxaan qiyaasnaa giraanta qoorta, laabta, iyo faraqa u dhexeeya iyaga;
ka dibna waxaan cabbirnaa cirridka, waxaanan ka jaray laba xargo. Dhererka hal xariiqa waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la soo gaabinayo xoqida laabta iyo dhexda, oo ku dar qaddarka 20 cm oo ah kaalmada dakhliga. Qalabka labaad ayaa loo xisaabiyaa sida cabbirka farqiga u dhaxeeya qoorta xayawaanka ilaa xabadka 10 cm;
waxaannu ku dhejin karnaa xarigga ugu horeeya gudaha gudaha;
ka samee bareeg hal dhinac ka mid ah oo ku dheji giraan;
meesha nasashada waxaannu ku dhejin karnaa hal dheeri oo aan ku dhejin karno;
jarjarey dhammaadka kale ee xakamaynta si ay u dhejiyaan;
waxaynu ku dhufannaa dhowr meelood oo hal mitir ah laga bilaabo dhamaadka cutubka iyadoo la adeegsanayo suunka;
waxaynu dhajisnaa xariijinta gudaha iyo dhamaadka dharka leh dhar xidhka;
markaa waxaan isku xireynaa faahfaahinta oo dhan waxaanna ku qabannaa xakamaynta.
Baro sida loo doorto alaabta lagu ciyaaro ee bakaylaha.
Wixii socdaalka bakaylaha hadda waxaa jira shukulo doorasho kala duwan, xitaa xitaa adigu waad u toostaa. Ugu fudud oo la isku hallayn karo waa dharka jidhka ee qaabka jilibka. Socodka hawada cusub waxay u roonaan kartaa xayawaankaaga, ama waxaa laga yaabaa inay ku adkaato isaga. Isku day in aad u fiirsato calaamadda maqalka iyo doorashada meel loogu talagalay socodka.
Sida loo sameeyo dunta loogu talagalay bakayle: video
Waxaan haystaa shaati-sharaf badan, waxaa jira sidan. Si sahlan loo dhigo, laakiin BUT waa mid aan eey ahayn. Ma aadi doono meesha aad rabto. Waxaan ku soconaa bakaylaha beerta, laakiin way ka sii badan tahay bakaylaha inay nagu socdaan. : D Waxaan sidoo kale u isticmaali doonnaa duufaanta ku-meel-gaadhsiisid - halkaas oo ay ku boodaan oo keliya dunta.
Sida hannaanka, bakaylaha oo dhan way ka duwan yihiin. Qaarkood waxay gashadaan dhammaan suumanka, waxa ay gashadaan. Guud ahaan, uma maleynayo in duufaanku u baahan yahay dunta. Haddii aad waddanka ku socoto, way ka fiicantahay inaad xakamayso, iyo khiyaanada. Oo magaalada jooga ayaannu tegaynaa. Iyo ecology ma aha isku mid, iyo eeyaha, iyo wasakh. Waxaa wanaagsan in uu guriga u fadhiisto.
Fikrad ahaan waa ku habboon tahay kediska, gabdhaha waa la rabaa in ay wax yar qaataan, waxaan ku qaatay hal suun keliya, kan ugu weynna wuxuu u rogay 180 darajo. Qalabka loo yaqaan "trois" waa kuwo wanaagsan, kaliya waxay yihiin kuwo aan qaali ahayn oo qaali ah.
Ku socoshada bakayle waa mooska mulkiilaha. Kalluunka laftiisa uma baahna inuu ka baxo dibadda.